Cheb'obi anyị gam akporo ngwaọrụ jiri okwuntughe siri ike | Akụkọ akụrụngwa
N'oge a, na ọtụtụ mmadụ nwere ngwaọrụ mkpanaka nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo, mkpa ọ dị inwe ike ichedo ozi dị na ya bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa ịmalite; N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ sistemụ arụmọrụ gam akporo a na-atụ aro ụzọ nchekwa dị iche iche iji gbochie ịbanye na gburugburu ya, ha abaghị uru mgbe ha na-anwa igbachi ụfọdụ ngwa.
Ọ bụrụ na anyị ekwuola na mbụ maka usoro ndị ọzọ na-atọ ụtọ maka kpochie iPad anyi ya mere, nyefee ya n'aka ụmụntakịrị ka ha nwee ike iji obi ike na-arụ ọrụ na ngwaọrụ ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mkpa yiri nke ahụ bụ nke anyị ga-agwa n’isiokwu a, ebe elebara anya na ngwaọrụ mkpanaaka android (mbadamba nkume ma ọ bụ ekwentị) ga-abụ ebumnuche anyị kacha mkpa.
1 1. Mkpọchi gị gam akporo ngwaọrụ na AppLock
2 2. Smart App Nchebe
3 3. Ezigbo ihe nchebe ngwa
4 4. Visidon Applock maka gam akporo
5 5. Smart mkpọchi maka gam akporo
1. Mkpọchi gị gam akporo ngwaọrụ na AppLock
Obi abụọ adịghị ya, nke a bụ ezigbo ngwa anyị nwere ike ibudata na Google play, nke na-enye anyị ohere nke igbochi otu, ọtụtụ ma ọ bụ ngwa niile anyị etinyela na ngwaọrụ anyị android; Nke ikpeazụ bụ nke kachasị dị mfe ịme, ebe igbochi ngwaọrụ niile ga-egbochi anyị ịnwe mgbochi nhọrọ.
Ka o sina dị, ọ bụrụ na anyị nwere ọtụtụ ngwa ma anyị chọrọ naanị ole na ole ka onye ọ bụla anyị ga-enye iwu maka ngwaọrụ mkpanaka anyị wee gbuo, mgbe ahụ anyị ga-aga nhazi AppLock iji bido hapụ naanị ngwa a ga-eji; mkpọchi ahụ abụghị naanị raara nye ngwa na ngwa arụnyere, kamakwa igwefoto n'etiti ọrụ ole na ole ndị ọzọ.
Ntinye nke obere koodu PIN chọrọ ka okwuntughe ka ị kpọghee ngwaọrụ niile.
2. Smart App Nchebe
Ngwa a yirikwara nke a dị n’elu, n’agbanyeghi na onye nrụpụta ya na-akwado atụmatụ ndị ọzọ na-atọ ụtọ iji. Na-eche na anyị egbochila ekwentị anyị android ma efuola, mmadụ nwere ike ịnwa ịkpọghee otu anyị. Mgbe nke 3rd mechara nwaa ngwa a android see foto onye ahu jiri igwefoto n’ihu.
Ọ ga-enyekwara anyị aka igbochi izipu ozi SMS na ohere ịme oku ekwentị; mbipute a na - akwụghị ụgwọ gụnyere mgbasa ozi, na - enwe ike iwepu ya ma ọ bụrụ na azụrụ ụdị mbipute akwụ ụgwọ.
3. Ezigbo ihe nchebe ngwa
Na mgbakwunye na inyere anyị aka igbochi ụfọdụ ngwa a ga-eji na oge ụfọdụ, ngwa a android ọ na-akawanye zoo ke ndabere (mee ka ha ghara ịhụ anya) ndị anyị na-egbochi na ngwá ọrụ a.
Ọzọkwa, Ezigbo Ihe Nlekọta ga-egosi obere enyo maka "nchọpụta mkpịsị aka ụgha", ebe onye ọrụ ahụ na-etinye mkpịsị aka ha na ngwa ahụ na-awụlikwa elu na windo ọhụrụ ebe ha ga-ede na paswọọdụ ahaziri na mbụ; ọ bụrụ n’ịnọgide na-anwa imeghe ngwa nke egbochiri ma bụrụ nke a na-ahụ anya, windo na-ese n’elu mmiri ga-apụta ozi "mock" maka onye ojoo ahu izere oru di otua.
4. Visidon Applock maka android
Myirịta dị oke mma na ngwa ndị gara aga mgbe ị na-egbochi otu ma ọ bụ karịa ngwa na ọrụ nke ngwaọrụ mkpanaka android; ihe dị iche bụ na nchọpụta ihu, ọnọdụ achọrọ iji nwee ike ịmeghee otu egwuregwu ma ọ bụ otu ngwaọrụ dịka mmasị anyị si dị.
N'ihi na sistemụ njirimara ihu nwere ike ịda, Vidison AppLock kpaliri onye ọrụ ịbanye paswọọdụ iji mee ihe dị ka ihe ọzọ maka ịkpọghe; Yabụ, ọ bụrụ na n'ihi ihe ụfọdụ ngwa ahụ enweghị ike ịmata ihu anyị wee si otú a kpọghee kọmputa ahụ, mgbe ahụ anyị nwere ike iji okwuntughe meghee ya kpamkpam.
5. Smart mkpọchi maka android
Ikekwe ntakịrị zuru ezu, ngwa a android nwere ebumnobi nke igbochi ụdị ihe dị iche iche nwere ike ịbụ akụkụ nke ngwaọrụ mkpanaka anyị. Ozugbo anyị wụnye ma na-agba ọsọ Smart Lock anyị ga-ahụ interface nke enwere taabụ 3, nke bụ: ngwa, multimedia na kọntaktị.
N'ụzọ dị otú a, onye ọrụ nwere ike igbochi ụfọdụ ngwa arụnyere na ngwaọrụ mkpanaka ha android, nchekwa ma ọ bụ faịlụ akọwapụtara (foto ma ọ bụ vidiyo) yana, kọntaktị kọntaktị anyị kwadoro na ngwaọrụ mkpanaka.
Ozi ndị ọzọ - Esi egbochi Apple mobile ngwaọrụ iji nyefee ụmụaka aka
Nbudata n'efu - Ngwa, Smart App Protector, Onye nchebe zuru okeVisidon Applock, Oghere mkpọchi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » 5 ezigbo uzo ozo iji chekwaa gam akporo na okwuntughe